Marijuana – ဆေးခြောက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » Marijuana – ဆေးခြောက်
ဒီအသက်ဒီအရွယ်ထိ… ဆေးခြောက်ရော… ဘာညာ စိတ်ကြွဆေး စသည်ဖြင့်ရော… ဘာမှ မသုံးဖူးသေးတာ
အသက် ၆၀ ပင်စင်ယူတော့မှ.. မြန်မြန် လှလှလေးသေအောင် သုံးစေသင့်တယ်…။
အခုလိုခေတ်.. ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာ.. အသက်ကြီးသူတွေသေနှုန်းက.. ကလေးမွေးနှုန်းထက်နည်းနေတော့.. တိုင်းပြည်ထဲ.. အလုပ်မလုပ်.. ထိုင်စား.. သက်ကြီးတွေပိုလျှံနေပြီး.. တိုင်းပြည်တွေ ဘဏ္ဍာငွေရန်ပုံငွေတွေ..လူရွယ်.. လူငယ်တွေဒုက္ခနဲ့လှလှတွေ့လာကြတယ်..။
ဒါကို.. လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပေါ်လစီနဲ့လည်း ရှင်းလို့မရဲကြသမို့.. စနစ်သစ်အရ.. မူးယစ်ဆေးဝါးကို သုံးဖို့ကြံနေကြပုံရပါတယ်..။
သက်ကြီးတွေပိုလျှံနေပြီး.. တိုင်းပြည်တွေ ဘဏ္ဍာငွေရန်ပုံငွေတွေ..လူရွယ်.. လူငယ်တွေဒုက္ခနဲ့လှလှတွေ့တဲ့ ကိစ္စကို
ကွီးဖြိုးကို ရှင်းခိုင်း လိုက်ရမလား။
တိုင်းပြည်ပါ.. ဒုက္ခနဲ့ လှလှနဲ့ ဧရာမကြီးလောက် တွေ့သွားမယ်လို့ မြင်မိတာပဲ။
ဘိလပ်လိုဒေ ဖတ်ရမှာ စိတ်ညစ်လို့ မဖတ်တော့ဘူးး
ရဲတိုက်လေးကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ သာ တဂျီး တတပ်တအား ဆိုင်ရာပိုင်ရာတွေကိုပြောပေးပါ။
ထိုင်းကတော့.. ဆေးခြောက်ကို တရားဝင်ဖြစ်အောင် စနေပါပြီ..။
အမေရိကားမှာ.. ပြည်နယ်ပေါင်း ၈ခု အပျော်သဘောသုံးတာ တရားဝင်ဖြစ်နေပါတယ်..။ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်အပါအ၀င်ပါ..။ ပြည်နယ်၂၈ခုက.. ဆေးအဖြစ်သုံးတာ(ဆရာဝန်လက်မှတ်နဲ့) ခွင့်ပြုထားပါပြီ..။ ဖယ်ဒရယ်ကတော့.. no no ပါတဲ့..။
population bonus .. တိုင်းပြည်ထဲ.. အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေအချိုးများတာရဲ့.. ပြောင်းပြန်..
ဒါကို.. လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပေါ်လစီနဲ့လည်း ရှင်းလို့မရဲကြသမို့.. စနစ်သစ်အရ.. မူးယစ်ဆေးဝါးကို သုံးခိုင်းကြဖို့.. နိုင်ငံရေးသမားတွေက.. ကြံနေကြပုံရပါတယ်..
မြန်မာပြည်မယ်.. ဆေးခြောက်တရားဝင်ဖြစ်အောင်.. လော့ဘီလုပ်ချင်နေကြောင်း..။
အကူအညီနဲ့ အကြံဥာဏ်များကို ဖိတ်ခေါ်ပါကြောင်း..။
အဲဒီအပေါ်ကသတင်းအရ.. ဂျာမဏီက.. Refugee တွေအတင်းလိုချင်နေတာလည်းဆိုတဲ့ အဖြေကို ခန့်မှန်းနိုင်လိမ့်မယ်..။
ဂျာမန်တွေကလေးမွေးနှုန်းက လူကြီးသေနှုန်းထက်နိမ့်တဲ့အခါမယ်.. တိုင်းပြည်ထဲ ပင်စင်စား.. ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခံ. လူကြီးတွေချည်းစွက်များလာပြီး.. အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့.. အသက်တန်း.. ၂၀ကနေ.. ၆၀အထိက.. နည်းလာသမို့.. သူတို့လုပ်သမျှ.. အလုပ်တွေရဲ့ စုငွေအကျိုးအမြတ်တွေက.. သက်ကြီးတွေဆီ သွားကြရပါတေ့ာတယ်..။
ဒါကို.. ဂျပန်လည်းခံစားနေရတာကြာပြီဖြစ်ပါတယ်..။ အမေရိကားလည်း အခြေအနေမကောင်း..။ လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့ အသက်တမ်းတွေ စုထားတဲ့.. ဆိုရှယ်ဝင်ငွေတွေ.. ကိုယ်သက်ကြီးတန်းရောက်ရင်.. သုံးဖို့ရှိတော့မယ်မဟုတ်..။
ဒီအခါမယ်.. ဂျမန်ချန်စလာအမျိုးသမီးကြီး Angela Merkel က.. Refugee တွေခတ်တည်တည်နဲ့ တိုင်းပြည်ထဲကောက်သွင်းပြီး.. အဲဒီကလူငယ်/ရွယ်တွေကို.. အလုပ်တွေပေး.. အဲဒီ ပျက်နေတဲ့အချိုးကို ညှိပါတယ်..။
သူ့ရဲ့ အိပ်မက် အောင်မြင်/မမြင်.. ကတော့.. အခု မြင်တဲ့အတိုင်း..။